Maraykanka oo dajiyay qorshe dagaal oo ka dhan ah Al-Shabab
Xoghayaha difaaca dalka Maraykanka Leon Panetta ka hadlayay kulan ka dhacay magaaladda Washington ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada safka hore ee uga jira inay kula dagaalamaan dagaalyahanada Al-Qacida.
Leon Panetta waxaa uu xusay waxaa in dawladiisu ay hadda qorshaha ugu jiraan oo ay dajiyeen istiraatijiyad ay ku wajayahayaan dagaalyahanada Al-Qacida waxaana uu sheegay in Soomaaliya safka hore uga jirto daslalkaas.
Qorshaha Maraykanka ayuu sheegay xoghayaha difaaca Maraykanka inay ugu jiraan inay su buuxda ugu ugaarsadaan Al-Qacidada ku sugan wadamada Soomaaliya, wadamo ku yaala waqooyiga qaaradda Africa, Yemen iyo Afghanistan oo uu ku sheegay inay yihiin wadamada ugu badan ee xilligaaan Al-Qacida ku xoogan tahay.
Soomaaliya waxaa uu sheegay in inkastoo la wiiqay awoodii ay lahaayeen sanado ka hor haddana Maraykanku uu si buuxda isha ugu hayo waxa ka socda qorsheynayaana inay tilaabo ka qaadaan xubnaha Al-Qacida ka tirsan ee Shababka caawiya.
Booga ay Internet,ka ku leedahay waaxda difaaca Maraykanka ee Pentogon, ka la yiraahdo ayaa waxaa lagu qoray in waxa ugu badan ee walwalka ku haya Maraykanka uu yahay iskaashiga ka dhaxeeya Xarakadda Al-Shabab iyo dagaalyahanada Al-Qacida ee dhaq dhaqaaqyada ka wada wadamo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka qaaradda Africa iyo kuwa dalka Yemen.
Qorshaheenu waa dagaal ka dhan ah Al-Qacida iyo xulafadooda ku sugan afarta wadan ee aan sheegay kuwaasoo xilligaan aanu si gaar ah ahmiyada u siinayno ayuu yiri xoghayaha difaaca dalka Maraykanka Leon Panetta.
Maraykanka ayaa si weyn ugu lug leh arrimaha amaanka iyo siyaasadda wadamo ka tirsan dunnida Muslimka oo Soomaaliyana ka mid tahay.